NK | एक पल हैन हरेक पल जन्मनु , शुभकामना !
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०७८, बिहीबार
काठमाडौं । मानिस किन जन्मन्छ ? किन मर्छ ? के को लागि बाँचिरहेको छ? के सपना देखेर समाजमा संघर्षको लागि दौडिरहेको छ? सफलता प्राप्तिको लागि कर्म र लगन दुबैको आवश्यकता पर्दछ । मृत्यु पश्चातपनि नाम अमर रहोस र सबैले मान्ने ब्यक्ति बन्ने लालचा सबैमा हुन्छ ।
केहि गरौ भन्ने धारणा समाजमा मिलनसार र सहयोगि भई सबैको दुख सुखको सहारा बनेर आफ्नो नाम र ईमानलाई जोगाउने चाहाना सबैमा हुन्छ । सोहि चाहाना बोक्दा बोक्दै आफ्नो जिवन ढल्कदै गएको पत्तो हुँदो रहेनछ , तिमिलाइ हरेक पल पत्तो होस , शुभकामना | बिलासिताको जिवनलाई त्यागेर केहि ज्ञान सिकि सक्षम बन्ने चाहानाका साथ ईमानदारिता, सत्य, अनुशासन, मर्यादालाई सदैव साथमा लिई संघर्ष गर्दै आएकि छौ , सदैब आइराखोस |
तिमिले पृथ्वीमा जन्म लिएको पनि २२ औ बसन्त पुरा भएछ । वाल्यकाल छँदा जिद्दिपनाबाट मागेको कुरा पाईन्थ्यो तर अव कुनै कुरा मागेर पाईदो रहेनछ् , कठोर संघर्ष र मिहेनत आफु स्वम् ले गर्नु पर्छ । टाढा रहेको सफलताको फल टिप्न ज्यानको बाजी लगाएर दौडिन पर्ने रहेछ , दौडिरहेकी छौ , दौडिरहनु। तिमी आज जिवनको यो समयमा प्रवेश गर्दै छौ , जसमा तिम्रो जिम्मेवारी, कर्तव्य र समाज सेवाको बाल्यकाल देखिको उदेश्यको सुरुवात गर्नु छ । आफ्नो ब्यक्तिगत र परिवारिक जिवनलाई नयाँ उचाई दिनु छ । समाजमा रहेका सबैको मुहारमा खुसिको बत्ती बाल्नुछ तिमिलाइ ,असाहाय गरिव दुखिहरुको मुहारमा खुसि ल्याउने कोसिस गर्नुछ । जिवनमा आजको जन्मदिन तिम्रो लागि ईतिहास मै एकदम महत्वपूर्ण छ, त्यसैले म भगवान संग प्राथना गर्छु तिम्रो कारणले कसैको मन नदुखोस , सबैको मुहारमा खुसि देख्न पाईयोस्।
त्यस्तै क्षण हो तिमि, हामि साथीहरुको लागि अमूल्य रत्न भएर तिमी जन्मेको आजको अर्थात श्रावण १४ गतेको दिन।
असल र सफल व्यक्तिको रूपमा हेर्ने हाम्रो चाहना , अबोधपनमा बैँस गर्दै पहिलो खुड्किलो पार गर्यौं। त्यस अवसरमा तिमीलाई अनेक-अनेक शुभकामना अनि अथाह माया…।
अनि कतिबेला लाग्छ, तिमि यो संसारमा टेक्दा जुन अवस्थामा थियौ एकदम कमजोर अवस्थामा, त्यसपछि बिस्तारै परिपक्क र बलियो हुँदै गइरहेको छौ । तिनै बलियो हुँदै सिढीँहरु चढ्दै गर्दा आज एक खुटकिलो पार गरी अझै परिपक्क भएको महशुस गर्नु ।
लाग्छ, तिम्ले जिन्दगीको बाटो लेखीरहेको छौ एक खाली पेपरमा । ति पेपरमा प्रयोग भएका शब्दहरु एकदम परिपक्क छन । ति शब्दहरु ऋब फेरी फेरि गरेर लेख्नु
, किनकी ति शब्दहरु फेरि फेरि परिबर्तन तथा सुधार हुन सक्दैनन् । बिस्तारै सुधार्दै जानु नै लेखाइको बिशेषता हो । त्यही लेखाईलाई अगाडी बढाउँदा आज एउटा पेज पुरा भएको छ र अर्को पेजमा लेखाई शुरु हुन लागेको छु । ताकी आज एउटा सिढीँ पार गरेर नयाँ सिढीमा प्रबेश गरेकि छौँ ।
यो तिम्रो लागी एउटा उज्यालो दिन हो । यो सुनौलो अपरचुनेटीमा तिम्रो बाबुआमा जस्ले तिमिलाइ यो जीवन दिनुभो, अनि अन्य शुभ तथा अशुभ चिन्तकहरु, अनि सम्पुर्ण तिमि सँग जोडिनुहुने दाजुभाई, दिदी बहिनीहरु, साथी सगीँहरु सम्पुर्णलाई हृदय देखी नै आभार ब्यक्त गर्न चाहान्छु । किनकी उहाँहरुको साथ सहयोग नै ठुलो रह्यो तिम्रा यी सुनौलो जीवनका यी सिँढीहरु चढ्नको लागी ।
फेरि पनि भन्छु साथी , जिन्दगीमा ठूलो मान्छे होइन असल मानिस बन्नू, तिम्रो यो प्यारो साथीको तर्फबाट तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना…..!
तिमीलाइ यो धर्तीमा पाइला टेकाउने , आमा बाप्रति हार्दिक नमन!
साथै तिमिलाइ पनि उच्च सम्मान र सम्झना !
एक पल हैन हरेक पल जन्मनु , कामनालाई जन्मदिनको धेरै धेरै कामना , सुभकामना |